Akụkọ - N’okpuru akụ na ụba ahịhịa ndụ, ngwaahịa nkwakọ iko dịka karama iko nwere ike ịnweta ohere ọhụụ
N'okpuru akụ na ụba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ngwaahịa nkwakọ iko dịka karama iko nwere ike ịnweta ohere ọhụụ
Ka ọ dị ugbu a, "mmetọ ọcha" abụrụla okwu ọha mmadụ nke metụtara mba niile n'ụwa. Enwere ike ihu otu ihe ma ọ bụ abụọ site na nrụgide na-arịwanye elu nke obodo m na nchedo gburugburu ebe obibi. N'okpuru nsogbu ịlanarị siri ike nke mmetọ ikuku, mba ahụ lebara anya na mmepe mmepe ya na akụ na ụba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ulo oru na-eleba anya na mmepe na nkwalite nke ahihia ahihia. Ahịa ahia na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya mụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịchụso akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Glass adapts ka ndị chọrọ nke iko nkwakọ marketization na greening. A na-akpọ ya ụdị ihe nkwakọ ngwaahịa ọhụụ n'ihi nchedo gburugburu ebe obibi ya, ezigbo ikuku ya, nguzogide ya dị elu, na nsị dị mfe, ọ na-ekerekwa òkè ụfọdụ n'ahịa ahụ. N'aka nke ọzọ, site na mmụba nke ndị bi na nchedo gburugburu ebe obibi na nchekwa akụ, ihe nkwakọ ngwaahịa iko ji nwayọ nwayọ bụrụ ihe nkwakọ ndị gọọmentị na-agba ume, yana ndị na-azụ ahịa ịnabata igbe nkwakọ iko a na-arịwanye elu.
Ihe a na-akpọ akụrụngwa iko a na-akpọ iko, dị ka aha ya pụtara, bụ ihe a na-ahụ anya nke ejiri iko iko gbazee site na ịfụ na ịkpụzi. E jiri ya tụnyere nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, ọ nwere uru nke obere mgbanwe ihe onwunwe, ezigbo mmebi ahụ na acid na-eguzogide corrosion, ihe mgbochi dị mma na mmetụta akara, a pụkwara ịmegharị ya na oven. Ya mere, a na-ejikarị ya ihe ọ beụ beụ na ọgwụ, ọgwụ na mpaghara ndị ọzọ. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na ọchịchọ maka ihe nkwakọ ngwaahịa iko na mba ụwa egosila na ọ na-agbadata, ihe nkwakọ ngwaahịa iko na-eto ngwa ngwa n'ihe gbasara nkwakọ ngwaahịa na ịchekwa ụdị mmanya dị iche iche, oge nri, kemịkal kemịkal na ihe ndị ọzọ dị mkpa kwa ụbọchị.
Na ọkwa mba, na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke "mmezigharị usoro nnabata" yana "ọgụ ọgụ maka nchekwa gburugburu ebe obibi" na nnweta nnabata na ụlọ ọrụ ahụ, mba m ewebatala iwu nnweta maka ụlọ ọrụ iko eji eme kwa ụbọchị iji mezie mmepụta ahụ , omume na omume itinye ego nke ụlọ ọrụ iko eji eme kwa ụbọchị. Na-akwalite nchekwa nchekwa, mwepụ nsị na mmepụta dị ọcha, ma duzie ụlọ ọrụ iko kwa ụbọchị iji zụlite ụlọ ọrụ nchekwa na gburugburu ebe obibi.
Na ahịa larịị, iji imeghari ka di ọku mpi na mba nkwakọ ahịa, ụfọdụ mba ọzọ iko nkwakọ akpa emepụta na sayensị nnyocha ngalaba-anọgide na-ewebata ọhụrụ ngwá na ịmụta ọhụrụ teknụzụ, nke mere ka a otutu ọganihu na imewe nke iko nkwakọ containers. Mkpokọta mmepụta nke iko nkwakọ iko jigidere na-aga n'ihu na-eto. Dabere na ọnụ ọgụgụ sitere na Qianzhan.com, site na uto nke oriri nke mmanya dị iche iche, a na-atụ anya na mmepụta na 2018 ga-arị elu ruo 19,703,400 tọn.
Ebumnuche na-ekwu okwu, mkpokọta ọnụ ọgụgụ nke iko nkwakọ akpa n'ichepụta ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-eto eto, na mba mmepụta ike nke iko nkwakọ containers na-amụba ngwa ngwa. Ọ ga-kwuru na iko nkwakọ containers nwekwara ụfọdụ adịghị ike, na mfe imebi bụ otu n'ime adịghị ike. Yabụ, ntinye nguzogide mmetụta nke karama iko na komiti abụrụla ihe ule dị mkpa.
N'okpuru ụfọdụ ọnọdụ iji hụ na ike iko nkwakọ ngwaahịa, belata nha nha nha nke karama iko bụ ime ka ahịhịa na akụ na ụba ha ka mma. N'otu oge ahụ, a ga-akwụrịrị uche maka fechaa nke nkwakọ iko. Nkwakọ ngwaahịa karama nwere ngwa ngwa nke akụkụ nke ahịa na usoro nke anụ ahụ na nke kemịkalụ dịka nkwụsi ike kemịkalụ, ikuku ikuku, ịdị nro na nghọta, nguzogide dị elu dị elu, na nsị dị mfe nke nkwakọ ngwaahịa. N'ọdịnihu, a ga-enwe ihe nkwakọba iko iji nwee atụmanya mmepe sara mbara.
Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Clear Glass mgbapụta karama, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ,